सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ७७ हजार जम्मा, कसले कति गरे ? – Everest Pati
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ७७ हजार जम्मा, कसले कति गरे ?
काठमाडौं : सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। सरकारले स्थापना गरेको कोषमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाको तलव बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजकुरमा पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ गरेका छन्। मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ७० हजार ६ सय ३०, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ६७ हजार ३० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन्।